လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကို ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) -
Akhayar Media – Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Nan Myat Phyo Thinn
Lu Lu Aung
San Thit La
Kyi Thar Han
လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကို ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel)
တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry) ရဲ့ ကြင်ယာတော်လောင်း မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) ဟာ လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကို ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ တော်ဝင်မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရပါတယ်။ သူမ သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ Facebook ၊ Twitter နဲ့ Instagram အကောင့်တွေကို ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၉ရက် (အင်္ဂါနေ့) နေ့လယ်ပိုင်းက ပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel)
“Meghan ဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အလေးထားသူပါ။ ဒါပေမယ့် လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကို ကာလအတော်ကြာအောင် ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ သူမ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ” လို့ တော်ဝင်မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရပါတယ်။
HUAWEI Nova 2i အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဧပြီလတုန်းက သူမရဲ့ ‘The Tig’ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်း ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက “ ၃နှစ်ကျော်ကြာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးကို ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ‘မီဂန်မာကယ်လ်’ က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
‘မီဂန်မာကယ်လ်’ ဟာ တော်ဝင်မင်းသား ‘ဟယ်ရီ’ နဲ့ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တုန်းက တရားဝင်စေ့စပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် မေလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ပြီးရင် တော်ဝင်မိသားစုဝင် ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry) နဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel)
တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ‘Kensington Palace’ ကပဲ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတာကြောင့် သူမရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်သုံး လူမှုကွန်ရက်တွေကို ပိတ်သိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကှနျရကျအကောငျ့တှကေို ယာယီပိတျသိမျးလိုကျတဲ့ မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel)
တျောဝငျမငျးသား ဟယျရီ (Prince Harry) ရဲ့ ကွငျယာတျောလောငျး မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel) ဟာ လူမှုကှနျရကျအကောငျ့တှကေို ယာယီပိတျသိမျးလိုကျတယျလို့ တျောဝငျမိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးမှ သိရပါတယျ။ သူမ သုံးနကေဖြွဈတဲ့ Facebook ၊ Twitter နဲ့ Instagram အကောငျ့တှကေို ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၉ရကျ (အင်ျဂါနေ့) နလေ့ယျပိုငျးက ပိတျသိမျးလိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ။
မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel)
“Meghan ဟာ လူမှုကှနျရကျမှာ အားပေးနကွေတဲ့ ပရိသတျတှကေို အလေးထားသူပါ။ ဒါပမေယျ့ လူမှုကှနျရကျအကောငျ့တှကေို ကာလအတျောကွာအောငျ ပိတျသိမျးမယျလို့ သူမ ဆုံးဖွတျလိုကျပါပွီ” လို့ တျောဝငျမိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးမှ သိရပါတယျ။
HUAWEI Nova 2i အကွောငျး အသေးစိတျသိရှိရနျ
၂ဝ၁၇ခုနှဈ ဧပွီလတုနျးက သူမရဲ့ ‘The Tig’ ဝကျဘျဆိုကျကိုလညျး ပိတျသိမျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက “ ၃နှဈကြျောကွာအောငျ တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဝကျဘျဆိုကျကွီးကို ပိတျသိမျးလိုကျပါတယျ။ အခြိနျတဈခုအတှငျးမှာ အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ” လို့ ‘မီဂနျမာကယျလျ’ က ဆိုခဲ့ပါတယျ။
‘မီဂနျမာကယျလျ’ ဟာ တျောဝငျမငျးသား ‘ဟယျရီ’ နဲ့ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၇) ရကျနတေု့နျးက တရားဝငျစစေ့ပျခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ မလေ (၁၉) ရကျနမှေ့ာ လကျထပျပွီးရငျ တျောဝငျမိသားစုဝငျ ဖွဈလာတော့မှာပါ။
မငျးသား ဟယျရီ (Prince Harry) နဲ့ မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel)
တျောဝငျမိသားစုတှဟော သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ‘Kensington Palace’ ကပဲ ထုတျပွနျလရှေိ့တာကွောငျ့ သူမရဲ့တဈကိုယျရညျသုံး လူမှုကှနျရကျတှကေို ပိတျသိမျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
တော်ဝင်မိသားစုဝင် ဖြစ်လာတော့မယ့် မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
[Zawgyi] တော်ဝင်မိသားစုဝင် ဖြစ်လာတော့မယ့် မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry) ဟာ မော်ဒယ် မီဂန်မာကယ်လ်…
တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry) နဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) တို့ လက်ထပ်တော့မယ်
[Zawgyi] တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry) နဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) တို့ လက်ထပ်တော့မယ် တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ (Prince Harry)…
[Zawgyi] မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေဟာ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းကိုယ့်ကြငှန်းနဲ့ ချစ်ခင်ကြည်ဖြူစွာ နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ၃ကြိမ်တိုင် မတရားကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီး ၁၈၈၅ခုနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ HUAWEI nova…
[ZawGyi] အဝတ်လျှော်တတ်ပြီလား အဝတ်လျှော်တာများ အဝတ်လျှော်စက်ထဲကို အဝတ်ထည့် ရေထည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်လိုက်ပြီး ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့မတွေးပါနဲ့ဦးနော်။ အဝတ်အစားဆိုတာက အလျှော်မတတ်ရင် အထိန်းသိမ်းမတတ်ရင် အလွယ်တကူပျက်စီးလွယ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်အဝတ်လျှော်တဲ့အခါလုပ်မိတတ်တဲ့အလေ့အကျင့်အမှားတွေနဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းမှန်မှန်အဝတ်လျှော်ရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အဝတ်အထည်ရဲ့အသား…
ကျွန်မအမြဲတမ်း ယုံကြည်လက်ခံမိတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမြဲတမ်း အပြုသဘောဆန်တဲ့ အတွေး၊ အကောင်းမြင် စိတ်ဓါတ်နဲ့ အရာရာကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ငယ်တုန်းကတော့ အပြုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ မွေးရာပါ ထူးခြားတဲ့…
မိုးရာသီရောက်လာတာနဲ့အမျှ ခြင်တွေ ပိုပြီးတော့ပေါလာကြပါတယ်။ ခြင်တွေဟာ စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးရုံတင် မကဘူး။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမှေးရောင်ရောဂါစတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေကို ပါဖြစ်စေပါတယ်။ ခြင်ဆေးခွေတွေထွန်းခြင်းဟာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်မှု မရှိပြန်ပါဘူး။…
[ZawGyi] အနမ်းဋီကာဖွင့်ကြမယ် ရှေးတုန်းက အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ နှုတ်ခမ်းချင်းးနမ်းတာကို ခွင့်မပြုကြပါဘူးတဲ့။ နှုတ်ခမ်းအစား နှာခေါင်းကိုပဲ နမ်းကြပါတယ်။ အရင်တုန်းက ရောမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဇနီးနဲ့ ညဘက်အိပ်ရာဝင်ခါနီးကျရင် နမ်းခြင်းကို…
တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေဟာ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းကိုယ့်ကြငှန်းနဲ့ ချစ်ခင်ကြည်ဖြူစွာ နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ၃ကြိမ်တိုင် မတရားကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီး ၁၈၈၅ခုနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုလိုနစ်စနစ်ဆိုးကို ဒူးထောက်မခံခဲ့တဲ့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ရန်အတွက်…
[Zawgyi] ဆိုင်းသဘင်စီးပွားရေး မြန်မာ့ဆိုင်းလုပ်ငန်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်ကြသူများ၏လုပ်ငန်းကို ဆိုင်းသဘင်စီးပွားရေးဟု တင်စားအမည်ပေးလိုပါတယ်။ မြို့ကြီးများတွင် အငြိမ့်တည်ထောင်သူ၊ ဇာတ်တည်ထောင်သူများအရေအတွက်မှာ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်နှင့်နှိုင်းစာပါက အတော်ပင်လျော့နည်းသွားကြောင်း ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်းအဖွဲ့များရဲ့အရေအတွက်မှာ လျော့နည်းမသွားတဲ့အပြင် အချို့မြို့များမှာ…
တစ်ခါတုန်းက တောကျီးကန်းလေးဟာ သူ့ဘဝသူတွေးပြီး ကျေနပ်နေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ တောကျီးကန်းလေးဟာ ငန်းတစ်ကောင်ကိုမြင်ပြီး အခုလို တွေးထင်မိလိုက်တယ်။ “ဒီငန်းလေးရဲ့ အရောင်အဆင်းက အရမ်းဖြူတာပဲ၊ ငါ့မှာတော့ မဲလိုက်တာ ၊…
Kyaw Soe Aung
စက်ဘီးတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးသတိထားသင့်တဲ့အချက်ကတော့ စက်ဘီးကို ဘယ်လိုအသုံးပြု စီးနင်းမှာလဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါမှ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ့် စက်ဘီးကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုစက်ဘီးမျိုးကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်သလဲဆိုတာ သိဖို့ပါပဲ။ မြို့တွင်းစက်ဘီး (City Bike) နိုင်ငံတကာမှာဒတ်ခ်ျ (Dutch) စက်ဘီးလို့လည်း သိကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ အမ်မ်စတာဒမ် မြို့မှာဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေစီးတဲ့ စက်ဘီးတွေနဲ့ အရမ်းဆင်တူလို့ပါ။ တစ်ချို့ကလည်း ဒီ City Bike တွေဟာဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေဆီကဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ အခုရန်ကုန်မှာတော့ ဂျပန်ကနေတင်သွင်းတဲ့ ဂျပန်ဘီးတွေကပိုပြီးနေရာယူထားပါတယ်။ ပုံစံချင်းကတော်တော်လေးဆင်တူပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဆင်ထားတာပါ။ အဝတ်အစားပုံစံမရွေး၊ ယောင်္ကျားမိန်းမမရွေးစီးနှင်းနိုင်တဲ့အပြင် မြေနီလမ်းရော ကတ္တရာလမ်းတွေမှာလည်း အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ဟိုနားဒီနားသွားရာမှာအထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီစက်ဘီးမျိုးကအလေးချိန်စီးအတွက် ခရီးဝေးသွားဖို့ လမ်းကြမ်းမှာစီးဖို့မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဈေး – အနည်းဆုံးလေးသောင်းကနေအများဆုံးသုံးသိန်းအထိ ရရှိနိုင်သည့်နေရာ […]
share 12 months ago
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၅ လန်ဒန်ဒါဘီအပါအဝင် အသင်းကြီးတွေရဲ့ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်များ
Htet Htet Wint Lwin
[Zawgyi] ဒီတစ်ပတ်ကြားရက်တွေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ညတွေအလွန်မှာ ဆက်လက်မြင်တွေ့ရမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၅ ကတော့ လန်ဒန်ဒါဘီလို့ခေါ်တဲ့ ချယ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေပါဝင်နေလို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။ အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အခါတုန်းက ဘုန်းမောက်ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၃-၀ ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချယ်လ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ ဆက်လက်ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ယူနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့လည်း ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ် ဘန်လေနဲ့ပွဲအရှုံးနောက်ပိုင်း ဆက်တိုက်အနိုင်ယူလာခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ အာဆင်နယ်ရဲ့ ချန်ပီယံအိပ်မက်ကို ရိုက်ချိုးပြနိုင်မလား စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါပဲ။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မြင်တွေ့ရမယ့် မန်ယူ နဲ့ အဲဗာတန်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ရွန်းနီနဲ့ လူကာကူတို့ဟာ အသင်းဟောင်းကိုယ်စီကို ပြိုင်ဖက်အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။ မန်စီးတီးကတော့ စနေညမှာ […]
share4months ago
[Zawgyi] ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မယ်၊ နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ မဖြစ်တော့ဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလည်း လှပလာမယ်၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါလည်း မဖြစ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ စားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့အပြင် လိင်ဟောမုန်း (Testosterone Hormone) ကိုလည်း ထုတ်ပေးတဲ့အတွက် အမျိုးသားတွေအတွက် ကာမအားတိုးဆေး သုံးစရာမလိုတော့ဘူး။ အားကစားလုပ်လိုက်တာနဲ့ ကာမကိစ္စနောက်လှည့်ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကို အပြင်းအထန်လုပ်မယ်ဆိုရင် လိင်စိတ်လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆေးသိပ္ပံဂျာနယ် (Medicine and Science in Sports and Exercise Journal) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ် (University of North Carolina) က သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတဲ့ အားကစားသမား […]
share6months ago
ဘူဖေးစားတဲ့ အလေ့အထက အရင်တည်းက ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့ အဝစားဘူဖေးတွေက ပိုခေတ်စားလာပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ပိုက်ဆံပေးထားရတာနဲ့ တန်အောင် ဘူဖေးကို ဘယ်လို စမတ်ကျကျစားမလဲဆိုတာ အကြံပေးပါရစေ … မစားမီ (၁) ဘူဖေး စားနေကျသူက လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပြီး အစာစားချင်စိတ်လည်း ရှိနေမှာပါ။ (၂) ရေသောက်ပါ။ ဘယ်အနေအထားမှာဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ လိုပါတယ်။ ရေနည်းနည်းလောက် သောက်ထားမှ အစာကျေညက်စေဖို့လည်း အထောက်အကူပြုမှာပါ။ (၃) ဘူဖေး စားပါမယ်ဆိုမှ ဗိုက်ကြီးက မအီမသာ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်နေရင် စားရတာတန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဗိုက်ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အူရှင်း အစာအိမ်ရှင်းနေရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ (၄) […]
share 11 months ago
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ Tech သတင်း ၅ ခု(၁၄.၈.၂၀၁၇)
[Zawgyi] (၁) Camera App အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Google Google ဟာ Camera App အသစ်ဖြစ်တဲ့ Selfie Flash Feature ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီ Feature ဟာ အလင်းရောင်နည်းတဲ့အချိန် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ပုံထွက်ကောင်းအောင် ကူညီပေးတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန် Flash ကို Automatic ဒါမှမဟုတ် On ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ Feature ကို Android 7.11 နဲ့အထက်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂) 256GB Version ထွက်လာမယ့် Samsung Galaxy Note 8 Samsung ဟာ […]
ကျွန်မတို့တွေရဲ့ နှာခေါင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ အချိုင့်လေးကဘာများလဲ။ သူကဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိမလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဒီနေရာအချိုင့်လေးက မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းတွေအချိုးကျလှပခြင်းအတွက်လည်း တစိတ်တပိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအချိုင့်လေး တိမ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် မထင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေခဲ့ရင် သွားဖုံးမောက်သယောင်လေးရှိနေပြီး အလှအပကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းကလေးငယ်ငယ်အရွယ်မှာ မိဘတွေက လက်လေးနဲ့ဖွဖွဖိပြီးပုံဖော်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသူကပီပီပြင်ပြင်ပုံမပေါ်ဘဲ ပျက်ယွင်းနေခဲ့ရင်တော့ နှုတ်ခမ်းကွဲတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီအချိုင့်လေးကို Philtrum လို့ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါလေးဟာ ကျွန်မတို့မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲနေရစဉ်အချိန်က ကိုယ့်မျက်နှာဘယ်လိုပုံပေါ်လာခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သန္ဓေသားလောင်းရယ်လို့ ပီပီပြင်ပြင်ပုံမပေါ်ခင် နှစ်လသုံးလသားအရွယ်လောက်မှာ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ပါးစပ်ပေါက်လေးတွေစပြီး ပုံပေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ပါးစပ်ပေါက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုနှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးနေရာတကျရှိလာချိန်မှာ Philtrum လေးပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်က မှန်မှန်ကန်ကန်မချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းကွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီအချိုင့်ရာလေးက လူတွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ နို့တိုက်သတ္တဝါလေးတွေမှာလည်းပါရှိပါတယ်။ ခွေးနဲ့ကြောင်လေးတွေမှာဆိုရင် ဒီအချိုင့်ရာလေးကပဲအနံ့ခံခြင်းကို စွမ်းဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိုင့်ရာလေးက တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလို ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမရှိသော်ငြားလည်း သူမပါဘဲမွေးဖွားလာခဲ့ရင် […]
share9months ago
How To News Techchnology
Android ဖုန်းမှာ ဖျက်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ ?
တစ်ကယ်လို့သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေမှားပြီး ဖျက်မိတဲ့ အခါဘယ်လိုပြန်ယူရမလည်းဆိုတာ မသိဖြစ်နေတာလား ? ဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ် အမှတ်မထင် Touch Screen မှာမှားပြီးတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံတွေကိုဖျက်မိတာမျိုးဆိုတာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ မပူပါနဲ့ မှားပြီး ဖျက်မိတဲ့ ပုံတွေကိုပြန်ရယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အခရာကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မှားယွင်းပြီး ဖျက်မိတဲ့ပုံတွေကို Drfone WonderShare Android Data Recovery Software သုံးပြီး ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Tools ဟာ Tech Industry ပိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံး Recovery Rate ရထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်ဆုံး ဒီ Recovery […]
ဒီဘက်ခေတ်မှာ သင်တန်းတွေကလည်းမှိုလိုပေါက်လာတာနဲ့အမျှ ဟိုသင်တန်းဆိုလည်း ပြေးတက် ဒီသင်တန်းဆိုလည်း ပြေးတက်နဲ့ ပညာသင်ယူချင်သူတွေ အတော်များပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပညာရပ်တစ်ခုကို သင်ယူမယ်ဆိုရင် သင်ပေးမယ့်ဆရာက ဘယ်သူလဲ ဒီပညာရပ်မှာ တကယ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သင်ယူမယ့် ဘာသာရပ်အပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှု စိတ်ပါဝင်စားမှုအပြည့်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ တချို့များကျတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် တက်ထားဖူးပြီး အစအဆုံး မသင်ကြားဖြစ်မိတာကြောင့် အစကပြန်သင်ရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြုံလာရင်လည်း ကိုယ်သင်ကြားဖူးတဲ့ အရာတွေဆိုပြီး ပေါ့လျော့တာ အလေးမမူတတ်တာမျိုး မပြုမူသင့်ပါဘူး။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်သိထားတတ်ထားတာက အရှုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ခုဖော်ပြမယ့် ပုံပြင်လေးက သတိပေးနေပါတယ်။ တစ်ခါက စောင်းဆရာကြီးတစ်ဦးဆီကို စောင်းအတီးသင်လိုတဲ့ တပည့်နှစ်ယောက်ရောက်လာပါသတဲ့။ ပထမတပည့်ကို စူးစမ်းမေးမြန်းကြည့်တော့ အရင်ကစောင်းပညာနဲ့ နီးစပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို […]
[ZawGyi] Steak ကောင်းကောင်းလေးစားမယ်ဆိုရင် အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Steak ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးပြီး အရသာရှိရှိစားသုံးကြတဲ့အလေ့အထက ခေတ်စားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Steak ကောင်းကောင်းလေးလုပ်စားချင်တဲ့အခါဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ အခြေခံအနေနဲ့သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့မှတ်သားသင့်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုကင်မလဲ (၁) ဘယ်လိုအသားပဲဖြစ်ဖြစ်မကင်ခင် အခန်းအပူချိန်မှာထားပေးရပါမယ်။ လူတော်တော်များများက အသားကို ရေခဲသေတ္တာထဲကနေထုတ်ပြီး မီးပေါ်တင်ကင်လိုက်တာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ အသားကို အခန်းအပူချိန်မှာထားပြီးမှကင်တာက ကင်ချိန်နဲ့အသားကျက်မကျက်အပေါ်မှာအများကြီးသက်ရောက်သွားပါတယ်။ အသားကင်စားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင် နာရီဝက်လောက်အလိုကတည်းက ရေခဲသေတ္တာထဲကနေထုတ်ပါ။ အသားကိုအေးနေတဲ့အချိန်မှာကင်ရင်အသားကျက်မကျက်ကို ချိန်ဆရတာခက်ပါတယ်။ အသားကျက်ချိန်မှာလည်း အအေးခံထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်အတွင်းထားပြီးမှ တည်ခင်းပါ။ (၂) အသားကောင်းတစ်ခုဆိုရင် ရသာမှုန့်တွေအများကြီးသုံးဖို့မလိုပါဘူး။ ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်း တို့နဲ့တင် အရသာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
Entertainment mpt Sport
ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ မက်ဆီငြင်းခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ ကမ်းလှမ်းငွေကြေးပမာဏ
[Zawgyi] ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ မက်ဆီငြင်းခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ ကမ်းလှမ်းငွေကြေးပမာဏ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဘာစီလိုနာနဲ့ မက်ဆီ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားသားအနေနဲ့ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၅ သိန်းနဲ့ ၂၀၂၁ အထိ ဘာစီလိုနာမှာ ဆက်ရှိနေမယ့် စာချုပ်သစ်တစ်ရပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလို လုပ်အားခ ငွေကြေးပမာဏက လူအများအတွက် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို ချုပ်ဆိုဖို့အတွက် မက်ဆီအနေနဲ့ ပရီိးမီးယားလိဂ် ငွေကြေးဓနရှင်အသင်းဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ ပိုမိုများပြားလှတဲ့ စာချုပ်ကမ်းလှမ်းငွေကြေးအလုံးအရင်းကို မျက်နှာလွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MARCA သတင်းအရ မန်စီးတီးအနေနဲ့ မက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် တစ်ပတ်လုပ်အားငွေပေါင် ၈ သိန်း ၅ သောင်း အပြင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအတွက် အပိုဆုကြေးငွေ ယူရို သန်း […]
Akhayar in Burmese means “Prime, Crucial, and Essential.” It isanew and exciting content platform in Myanmar that covers lifestyle, food, technology, entertainment and more.
© 2017 Akhayar.com - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review